Maitiro ekuwana emahara mwedzi yeApple Music kuburikidza neShazam | IPhone nhau
Nzira yekuwana sei mwedzi yemahara yeApple Music kuburikidza neShazam
Kisimusi inosvikawo mafomu kubva kuApple. Gore rega rega Apple Music inopa yemahara kunyorera mwedzi kuburikidza neShazam app kubatana. Kukwidziridzwa uku kunobvumira vashandisi kutenga mwedzi yemahara se "yedzo" kana "muripo" wekushandisa iyo mimhanzi app. Izvi hazviregi kuva nzira yekusimudzira kushandiswa kwemasevhisi maviri nechinangwa chekuwedzera vanyoreri veApple Music mushure mekunge nguva yekuedza yapera. Kusvika mwedzi mishanu yemahara inogona kuwanikwa zvichienderana nekutora chikamu mune zvekare kukwidziridzwa
1 Nzira yekuwana mwedzi yemahara yeApple Music paShazam
2 Hukama hwakaumbwa pakati pemasevhisi ese ari maviri
Nzira yekuwana mwedzi yemahara yeApple Music paShazam
Nzira iri nyore yekuwana kusimudzirwa ndeye kudhanilodha iyo Shazam app mune yedu terminal. Kuti uite kudaro, ingo dzvanya pane zvinotevera link, kana kudzvanya pane app icon pazasi pechinyorwa chino. Kana tangove neapp yekudhawunirodha, isu tichaona banner nyowani yaunoona: «Nguva Yakakwana. Tora kusvika kumwedzi mishanu yeApple Music yemahara ».
Kana yangopinda, Shazam inoongorora account yedu yeApple ID kuti itore ruzivo nezve nhoroondo yedu paApple Music. Kureva, kana takambotenga kunyoreswa, mangani mapromotion erudzi urwu atakabatana, nezvimwe. Saka tinogona kubva mwedzi miviri mahara, kana wakamboedza sevhisi pane dzimwe nguva, kusvika mwedzi mishanu yemahara kana tisina kuyedza chishandiso.
Kana tikawana application hatigone kuona banner: usanetsekane. Pane dzimwe nzira dzakasiyana. Imwe yacho ndeyekudzvanya pane zvinotevera link kana kutora QR yemufananidzo unotungamira chikamu ichi chechinyorwa. Panguva iyoyo, iyo Shazam app ichavhura uye isu tichawana kukwidziridzwa nenzira imwechete nekudzvanya pane banner inosanganisirwa mukati meiyo application pachayo.
Kana tikadzvanya pa "tora" kukwidziridzwa kuchave Iyo Apple Music app ichavhura uye pfupiso yemhedzisiro yekupihwa kwedu icharatidzwa. Pazasi unoona muenzaniso wangu. Ini zvangu, ndakanga ndatowana kukwidziridzwa kwakafanana saka ndinopihwa nguva yekuedza mwedzi miviri yemahara mushure mezvo 9,99 euros ichatanga kubhadhariswa, muripo wepamwedzi weiyo yakajairika vhezheni yeApple Music.
Kune avo vashandisi vanotova nekunyoreswa kunoshanda muApple Music, vanogona kuita maitiro akafanana uye mwedzi inoenderana yekubhadhara kwavo sevhisi ichaderedzwa. Kureva kuti vaizova nemwedzi miviri vasina kubhadhariswa mari iyi kuitira kuti ive “chipo” cheKisimusi. Iwe unofanirwa kungwarira kana iwe uchingoda kutora mukana wekusimudzira kubvira Mushure mekupera kwe "yedzo" nguva, muripo unochajwa otomatiki. Kana iwe uchida kunakidzwa nekusimudzirwa, ini ndinokurudzira kuseta maaramu mazuva mubhadharo usati waitwa kuitira kukanzura kusimudzirwa.
Hukama hwakaumbwa pakati pemasevhisi ese ari maviri
Shazam inoratidza chero rwiyo mumasekondi. Tsvaga maartist, mazwi, mavhidhiyo uye zvinyorwa zvekutamba, zvese zvemahara. Kupfuura XNUMX bhiriyoni kuiswa kusvika ikozvino.
Shazam ndeimwe yeanonyanya kushandiswa maapplication kuziva mimhanzi zvakananga. Iyo meshini iri nyore sekuita kuti app "iteerere" kwemasekonzi mashoma kuti uwane zita, muimbi uye albhamu yerwiyo rwatiri kuteerera. Mukuwedzera, kubatanidzwa kwerwiyo nekutepfenyura mimhanzi mapuratifomu inobvumirwa kukwanisa kuiwana nyore nyore.
Kutevera kutenga kweApple kweShazam makore mashoma apfuura, chimiro chakabatanidzwa muIOS. Kutanga kuburikidza nemurairo muSiri. Zvadaro, zvakabvumirwa kuuya kwechidimburiko chebasa reShazam kuburikidza neControl Center. Nenzira iyi, kuwana sevhisi iri nyore sekudaidza Siri kana swiping kuti uwane iyo control centre.
Apple Music ibasa rekutepfenyura rinokutendera kuti uteerere nziyo dzinopfuura mamirioni makumi mapfumbamwe. Sokunge izvo zvisina kukwana, unogona kudhawunirodha nziyo nekudziteerera kunze kwenyika, tevera mazwi enziyo munguva chaiyo, ridza mimhanzi pamidziyo yako yese, tsvaga nhau zvinoenderana nezvaunofarira uye kurasika mumazita akasarudzwa nevapepeti vedu, pakati pezvimwe zvinhu. Uye iwe zvakare une zvepakutanga uye zvakasarudzika zvemukati.
Apple Music ndiyo mimhanzi yekufambisa sevhisi yeapuro hombe. Nezvinenge 70 mamiriyoni anoshanda vanyoreri ichiri kure kubva kune anopfuura 165 miriyoni iyo Spotify inayo nevanopfuura 360 miriyoni vanoshanda vashandisi. Asi zvakadaro, vashandisi vanogara paApple Music vakavimbika kupuratifomu uye vanotora mukana weaya marudzi ezvipo izvo Shazam uye Apple vanoita kuti vashandisi vawanike panguva dzakakosha dzakadai sekusvika kweKisimusi. Aya marudzi ezvirongwa angangobudirira simbisa manzwiro ekuve weApple Music yevashandisi vakanyoresa uye nekukonzera kunetseka kweavo vanokahadzika kuti vobhadhara here kana kuti kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Nzira yekuwana sei mwedzi yemahara yeApple Music kuburikidza neShazam
Kwete mupende. Ndagara ndichikwezvwa nenyaya yemavhidhiyo nemazwi, asi ini handitombowani mimhanzi mitsva uye pamusoro pazvo zvese, "inogadzirisa" raibhurari yangu yese yemimhanzi. Kana kuti, ini "ndakazvicheka". Zvese zvandaiva nazvo mu iTunes zvinopedzisira zvachinja chivharo, kusaziva Siri, kana kusanditendera kuti nditeerere / kurodha pafoni yangu.
Chaos isina mufungo. Ini ndinosarudza sevhisi isingadyire raibhurari yemimhanzi yandave ndichichengeta kwemakore.
Chekunyoreswa kutsva chete ...
Kana iwe uri kutobhadhara (sezvandinoita) hazvishande.
Pindura ku vuztin
Iyo iPhone 14 Pro uye Pro Max haizowedze notch